‘म त तिम्रै हु’ टाइटल गित रिलिज | यस्तो देखियो आकाश र ज्योत्सनाको केमेस्ट्री (भिडियो सहित)
रंग खबर, काठमाडौँ । अनमोल केसीको निर्माण रहेको फिल्म ‘म त तिम्रै हु’को टाइटल गित रिलिज भएको छ । गीतमा फिल्मका लिड कलाकार आकाश श्रेष्ठ र ज्योत्सना योगी फिचर भएका
सारी ब्लाउजमा देखिएका राजेशको ‘शकुन्तला’ टिजर : देखिएन भेष अनुसारको भाषा (भिडियो)
रंग खबर,काठमाडौँ । निर्माण समय देखिनै चर्चामा रहेको फिल्म ‘सकुन्तला’को टिजर रिलिज भएको छ । तेर्सोलिंगीको भेषमा सजिएका राजेश हमालको तस्बिर बाहिरीए पछी फिल्मको चर्चा चुलिएको थियो । फिल्ममा राजेश हमाल तेस्रोलिंगीको भूमिकामा
‘लुकामारी’ ट्रेलर रिलिज, नँया लूक्समा सौगात र कर्मा (हेर्नुस ट्रेलर)
रंग खबर, काठमाडौँ । फस्ट लुक पोस्टरबाटै चर्चा कमाएको फिल्म ‘लुकामारी’को ट्रेलर रिलिज भएको छ । फिल्ममा सौगात मल्ल र कर्मा शाक्यलाइ भिन्न लुक्समा देख्न सकिन्छ । सौगात मधेसी युबक
फिल्मकर्मीलाइ ‘होमवर्क’ देखाउदा, प्रधानमन्त्री र बिदेशीले हेरे ‘बुद्ध बर्न इन नेपाल’
रंग खबर,काठमाडौँ । आज बाट अलनेपाल पर्दशनमा आएका फिल्म ‘होमवर्क र बुद्ध वर्न इन नेपाल’ युनिटले हिजो बिहिबार रिलिजको पुर्बसंध्या पारेर प्रधानमन्त्रि, फिल्मकर्मी र विदेशीलाई फिल्म देखाए । फिल्म ‘होमवर्क’
प्रतिस्पर्धामा ‘बुद्ध वर्न इन नेपाल’ र ‘होमवर्क’
रंग खबर, काठमाडौँ । यो हप्ता दुइ नेपाली फिल्म पर्दशनमा आएका छन् । निरक पौडेल निर्देशित ‘होमवर्क’ र ज्ञानेन्द्र देउजा निर्देशित ‘वुद्ध वर्न इन नेपाल’। ‘बुद्ध वर्न इन नेपाल’ फिल्मलाई रमित
स्व. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अभिनित ‘सुख-दुख’को सिक्वेललाइ सत्यराज चौलागाईंले निर्देशन गर्ने
रंग खबर,काठमाडौँ । स्व. अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अभिनित सुपरहिट फिल्म ‘सुख-दुख’को सिक्वेल बन्ने भएको छ । स्व. निर्देशक शिब रेग्मीद्वारा निर्देशित फिल्मको सिक्वेललाइ सत्यराज चौलागाईंले निर्देशन गर्नेछन । करिब एक
ह्वात्तै मोटाएका जीवन र संचिताको ‘राधा’मा यस्तो देखियो केमेस्ट्री (फोटो/भिडियो)
रंग खबर, काठमाडौँ । नायक जीवन लुइँटेल र संचिता लुइँटेल यतिबेला फिल्म ‘राधा’ सुटिङ्गको क्रममा पुर्बी नेपालमा रहेका छन् । ‘राधा’को लोक गित सुटिङ्ग हुदै गर्दाको केहि तस्बिर र भिडियो
सुरविना र रजनीको यो कस्तो प्रेम ? अंगालोमा बाधिएर लिप किस (फोटोफिचर सहित)
रंग खबर,काठमाडौँ । नेपाली फिल्म उद्द्योगमा करियर बनाउन लागिपरेका दुइ अभिनेत्री सुर्बिना कार्की र रजनी केसी फिल्म ‘चर्खा’को सुटिङ्गको सिलसिलामा अहिले हेटौडामा छन् । फिल्ममा यी दुइ अभिनेत्री पहिलो पटक
‘कालो पोथी’ ट्रेलर रिलिज| देखियो मध्यपश्चिमेली पहाडी भेषभुषा (हेर्नुस ट्रेलर)
रंग खबर, काठमाडौँ । भेनिष फिल्म फेस्टिबलमा वेस्ट फिल्मको अवार्ड जित्न सफल फिल्म ‘कालो पोथी’को ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरियो
‘म त तिम्रै हु’ फस्ट लुक पोस्टर बाहिरियो
रंग खबर,काठमाडौँ । श्रावण ७ गते पर्दशन हुने फिल्म ‘म त तिम्रै हु’को फस्ट लुक पोस्टर रिलिज गरिएको छ। भुवन केसी पत्नी सुस्मिता केसी र सुवास थापाको निर्माण रहेको फिल्मलाइ अनमोल
‘साइनो’को नयाँ गीतमा टिक-टक च्यालेन्ज घोषणा
प्रेममा आयुषमान र शिल्पा !